Accueil > Gazetin'ny nosy > Ambositra : Nijery fotsiny ny fanafihana ny pôlisy
Tamin’ny asabotsy faha 08 febroary 2020 tamin’ny 11 ora alina teo dia nisy nanafika ny toerana fandefasam-bola Airtel ao Ampivarotanomby “rue de commerce” Ambositra izay 100 metatra miala ny kaomisarian’ny pôlisy ao Ambositra. Imbalo nipoaka ny basy nandritra ny fanafihana. Nanao izay tiany hatao ny jiolahy satria naharitra adiny iray sy sasany izany.
Voatifitra tamin’izany ny tompon’ilay tranombarotra. Mbola tsy fantatra izay hahazo ilay lehilahy noho ny bala niantefa tany aminy ary mbola tsaboana ao amin’ny hôpitaly ao Ambositra ny tenany hatramin’izao. Voatsatok’antsy ka maratra mafy ary mbola eny amin’ny hôpitaly ihany koa ny vadiny. Ny zanany vavy no nampijalian’ireo jiolahy na dia tsy novonoany aza nefa voadona ny sainy vokatr’izao fanafihana izao.
Ny tena nahagaga ny olona tamin’ity raharaha ity dia ny tsy nandraisan’ny pôlisy andraikitra mihitsy. Tsy azo inoana ny fialan-tsiny hoe tsy naheno izy ireo. Azo lazaina aza fa teo ambody rindrin’ny pôlisy no nitranga izao fanafihana izao. Afaka adiny iray aty aoriana vao tonga namonjy teo amin’ny toerana nisian’ny fanafihana ny pôlisy. Ny jiolahy nefa efa tsy teo intsony ary efa nanjavona sy tsy hita izay nalehany.
Mandeha dia mandeha ny resaka aty Ambositra fa misy firaisan’ny pôlisy tsikombakomba amin’ireo jiolahy amin’izao raharaha izao. Ny olona sasany indray milaza fa tsy mahagaga raha toa ka manjaka ny asan-dahalo satria eto Ambositra renivohitra aza tsy hitan’ny pôlisy ny hataony amin’ny fanafihana toa izao.
Talohan’izao dia nisy fanafihana koa tao Andrefatsena izay miala 200 metatra amin’ity kaomisarian’ny pôlisy ity. Mpanao volamena no voatafika tamin’izany. Tsy hita ireo jiolahy hatramin’izao.
Roa volana lasa koa izay dia nisy nanafika koa ny toerana fandefasana vola teo Alakamisy Ambositra. Mbola tsy afaka nanao na inona na inona koa ny pôlisy tamin’izany. Kivy tanteraka ary very fanahy mbola velona ny mponina aty Ambositra noho izany.
Mandry andriran’antsy ny mponina ankehitriny. Mirongatra izay tsy izy ny tsy fandriam-pahalemana.